Dhaabbata Godaansaa Idil-addunyaa / International Organization for Migration (IOM) - UNHCR Egypt
Tajaajila Godaantota & Hin Galmoofneef
IOM Sagantaa Galma Baqattoota Yunaayitid Isteetis biyyoota kudha shan guutuu naannoo MENA keessatti adeemsa qubsuma – bilisaan – gaggeessuuf Wiirtuu Deeggarsa Qubsuma (RSC) Baha Giddugaleessaa fi Kaaba Afrikaaf (RSC MENA) hojjeta. Marsariitii RSC MENA Egypt Processing qunnamuu dandeessu:
• Lakkoofsa sarara bilbilaa: 19472 ykn karaa iimeelii [email protected]
Kana malees, IOMn miidhamtoota daldala namaa, jeequmsa Koorniyaa irratti hundaa’e irraa hafan, fi gareewwan saaxilamoo ta’an biroo kanneen akka:
• Koolugaltoonni UNHCR (waaqaa adii qaban) waliin beellama galmee eegaa jiran.
• Godaantonni UNHCR keessatti galmaa’uuf hin yaadne, ykn faayilli UNHCR isaanii cufame, yoo xiqqaate ji’a 6f Masrii keessa jiraachaa turan.
MPA tajaajila gosa lama kenna:
• Gargaarsa Naannoo: madaallii dhimma tokkoon tokkoon isaanii irratti hundaa’uun gargaarsa armaan gadii of keessatti qabata: hawaas-dinagdee, mana jireenyaa, jireenya, seeraa, barnootaa, fayyaa sammuu & deeggarsa saayikooshawaasummaa, meeshaalee nyaataa hin taanee fi gargaarsa yaalaa.
• Assisted Voluntary Return & Reintegration (AVRR): IOM gargaarsa bulchiinsaa fi loojistikii, gargaarsa deebi’anii makamuu dabalatee, godaantota fedhii isaaniitiin gara biyya isaaniitti deebi’uuf murteessaniif ni kenna. Gargaarsi AVRR namoota gara biyyoota nageenya hin qabneetti ilaalamanitti deebi’uu barbaadaniif kennamuu hin danda’u.
Sarara bilbilaa Eegumsaa fi Gargaarsa Godaantotaa: 010 3204 6064
Wiixata hanga Kamisaatti: 9:00 – 12:00
Galmee IOM: 010 3339 8239
Wiixata hanga Roobii: 13:00 – 15:00
IOM Imeelii Gaaffii: [email protected]
Wiixata hanga Roobii: 13:00 AM – 15:00
Gocha sobaa gabaasuu: [email protected]
Wiixata hanga Roobii: 9:00 – 16:00
Fuula Feesbuukii IOM